I-China ye-CPLA esekwe kwiZityalo ePlasitiki engaPheliswanga isi-6.5 ye-intshi ye-Cutlery kunye neFektri | Gianty
I-CPLA, iCrystallized Poly Lactic Acid, yindibaniselwano ye-PLA (70-80%), ikhareji (20-30%) kunye nezinye izongezo ezifakwayo. Ngokutyala kwe-PLA iimveliso zethu zeCPLA ziyakwazi ukumelana namaqondo aphezulu ukuya kuma-85 ° C ngaphandle kokonakala. Xa sele ikristali, i-CPLA ayisabonakali, kodwa imhlophe. Njengoko i-CPLA isuselwa kwi-PLA, yi-100% ye-biodegradable kwaye ifanelekile ngokomgangatho we-EN-13432. Ekupheleni kobomi, iimveliso ezisekwe kwi-PLA zinokuphinda zisetyenziselwe ukwenziwa ngokutsha okanye zixutywe kumacandelo emveliso yokwenza umgquba.
Ukuqinisekiswa komatshini ofanelekileyo KOQINISEKILEYO, kulawulwa kwaye kulawulwa yi-TÜV AUSTRIA. Le ilebheli yeemveliso ezinokubanjiswa kunye nezinto eziluhlaza. Ukupakisha okanye iimveliso ezinombhalo ochanekileyo WOKUGQIBELA kuyakuqinisekiswa ukuba kuya kufakwa kwisityalo somgquba womatshini.
Into I-CPLA 6.5 intshi Isipha
Ubungakanani bebhokisi 34 * 18 * 19cm
Into I-CPLA 6.5 intshi ifolokhwe
Ubungakanani bebhokisi 36.5 * 21.5 * 18.5cm
Into CPLA 6.5 intshi Isipuni
Ubungakanani bebhokisi 41 * 18 * 23.5cm
Edlulileyo: I-CPLA esekwe kwiPlatinic engasetyenziswanga yiplanethi engenasiphulelo i-intshi ezi-7
Okulandelayo: ICPLA esekwe kwiPlatinic engasetyenziswanga yiplasitiki engahlawulelwanga ezi-6 ze-intshi